भिडियो मार्फत अक्षर सुधार गर्न सिकाउदै शिशिर अधिकारी (भिडियाेसहित) | दर्पण दैनिक
भिडियो मार्फत अक्षर सुधार गर्न सिकाउदै शिशिर अधिकारी (भिडियाेसहित)
प्रकाशित मिति: २०७८ भाद्र २३ गते ०७:११
शिशिर अधिकारी, प्रिन्सिपल - अनिता मिलन इन्टरनेशनल एकेडेमी
काठमाडौं । झण्डै एक दशक विभिन्न विद्यालयमा कला शिक्षण गरेका शिशिर अधिकारीको काँधमा विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आएपछि कला सिकाउन पाएका थिएनन । पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त रहनेको संख्या निकै बढ्यो जसका कारण शिशिर अधिकारीले आफ्नो कला शिक्षणलाई आधारभुत तह देखि सुरु गर्ने मौका पाएका छन । ललितकला क्याम्पसबाट स्नातक सकेर दशक लामो समय कला शिक्षण गरेका अधिकारीले Art and writing युट्युब च्यानल मार्फत अक्षर सुधार गर्न सिकाईरहेका छन । उनले समयको माग अनुसार युट्युबमार्फत सिकाउन लागेका बताए । उनले भने, ‘ज्ञान र सीपलाई आफूमा सिमित नगरी धेरैमा वाँड्नु सबैको लागि लाभकारी हुने ठानी अहिले सबैका ‘महागुरु’को रुपमा रहेको र जोसुकैको पनि पहुँचमा हुनसक्ने भएकाले युट्युब मार्फत सीप पस्कने जमर्को गरेको हुँ ।’
विशेषगरी विद्यार्थी लक्षित उक्त भिडियोमार्फत ईच्छुक सबैले लाभ लिन सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘देशमा लाखौं विद्यार्थी छन् । मेहेनत नगर्ने वानी र तरिका आभावले अहिले धेरै विद्यार्थीहरूको अक्षर राम्रो नहुने समस्या छ । त्यसैले हाललाई अक्षर सुधारका भिडियोहरु राखिएका छन् ।’ धेरै विद्यार्थीहरू तरिकाको अभावमा चाहेर पनि सजिलै अक्षर सुधार गर्न सकिरहेको अवस्था नभएकोले उत्कृष्ट तरिकाहरु सिकाईएको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यस्तै विद्यार्थीहरुले कलात्मक लेखन जान्दा त झन् सुनमा सुगन्ध हुने हुँदा कलात्मक लेखन पनि सिकाईएको छ । पछी विस्तारै चित्रकला सिक्नका लागि पनि भिडियोहरू राखिनेछन् र दर्शकको रोजाई अनुसारको भिडियो बनाईनेछ ।’ अधिकारीले जान्दै नजान्ने र शुरूवात गर्न खोज्नेहरुलाई लक्षित गरिने बताए ।
अरुभन्दा फरक के छ ?
खोजी गर्नेहरुको लागि असंख्य भिडियोहरू युट्युबमा छन् तर नेपाली विद्यार्थीहरू लाई लक्षित गरी नेपाली भाषा प्रयोगगरी सिकाईएका भिडियो निकै कम छन् । यसर्थ नेपाली विद्यार्थीको लागि अति उपयोगि हुनेछ ।
यसरि सामाजिक सञ्जालमार्फत आउन तपाईलाई के ले उत्प्रेरित गर्यो ?
मैले पढाएका कतिपय विद्यार्थीहरु जसले पढाइ सकिसकेका छन, उनीहरुले नै उत्प्रेरित गरेकाे भन्नु पर्छ । अहिले उनीहरु पढाई सके पनि विगतमा मैले पढाएको कुरालाई सझिने रहेछन । उनीहरु ले नै मलाई सामाजिक सञ्जालबाट पाढाउन सुझाव दिएका हुन । अनि आफैंले पनि विचार गरे सोसल मिडियाबाट पढाउदा नयाँ नयाँ बालबालिकाहरुले पनि जान्न पाउछन साँथै, जसले जतिवेला मन लाग्यो त्यति वेला हेर्न र सिक्न पाउछ भन्ने लागेर नै सुरु गरेको हुँ ।
(शिशिर अधिकारी अनिता मिलन इन्टरनेशनल एकेडेमीका प्रिन्सिपल हुन)
याे पनि बालबालिकाका असल साथी उत्प्रेरणाका खानी शिशिर सर, अब्बल कलाकार पनि